LANDELA i-Cervino ID v3 FSX & P3D - Rikoooo
Usayizi 306 MB
Play 25 931
I-Matterhorn (i-Cervino ngesi-Italian Matterhorn ngesiJalimane, i-Cervin ngesiFulentshi) intaba ye-4,478 ngamamitha ngaphezu kwezilwandle, emngceleni wase-Swiss-Italy, phakathi kwe-canton yaseValais ne-Aosta Valley. Lena indawo ebonakalayo yezithombe zentaba enkulu kanye nendawo yayo eseduze. I-Textures HD, i-Mesh LOD 14.
I-Matterhorn iyintaba edumile kunazo zonke eSwitzerland, kuhlanganise nokubukeka kwamapiramidi okuvela emzaneni waseZermatt, engxenyeni yokukhuluma isiJalimane yedolobha laseValais. Ukunyuka kombuso wasenyakatho kwakubhekwa njengokugcina kwezintaba ezinkulu zezintaba e-Alps, ne-Eiger kanye neGrans Jorasses okuhlangene ndawonye eyakha izinhlangothi ezintathu eziphezulu ezisenyakatho ze-Alps. (I-Wikipedia).
I-landscape imemezelwa ngokuzenzekelayo yi-installer. Awudingi ukwenza lutho ngaphandle kokuchofoza Okulandelayo.
Ungaqala indiza evela ezixhumanisini ezingezansi ezokubeka ngaphezu kweMatterhorn:
I-Longitude: 7 ° 39 ' 30 " E
Uma kungenjalo, isikhumulo sezindiza esiseduze yiBern (LSZB) eSwitzerland, mayelana ne-127 Klm, siqala uhlelo lwakho lokushayela!